China China fekitori 5052 PVDF ruvara rwakafukidzwa aruminiyamu coil ukobvu 0.7mm vagadziri uye vanotengesa | Huifeng
Ruvara rwakafukidzwa aluminium coil
China fekitori 5052 PVDF ruvara rwakafukidzwa aruminiyamu coil ukobvu 0.7mm
Ruvara-rwakavezwa aluminium (ruvara-rwakafukidzwa aruminiyamu coil), yakajairika polyester color-yakavharwa aluminium (color-yakavharwa aluminium coil), inoshandiswa zvakanyanya mualuminium yehuchi mapaneli, aluminium masiringi, nzvimbo dzepadenga, uye zvasara zvinhu. Kuita kwayo kwakadzikama, uye hazvisi nyore kukanganiswa. Rudzi rwezvinhu zvitsva.
Zvigadzirwa zvaro zvikuru muaerospace, ndege, kutumira, indasitiri yemakemikari, zvifambiso, zvemagetsi nemagetsi, kunyanya zvigadzirwa izvi zvinogona kuzadza chisina chinhu mumusika weChina nehukuru hwayo, yakakosha uye yakarurama Al yakaoma alloy.
Rondedzero yealuminium coil
Chiwanikwa chiwanikwa nhamba: 1060, 1070, 1100, 2A12, 2024, 3003,3004, 3105, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063, 6082, 7075 nezvimwewo
Kutsamwa: H32 H24 H16 H18 O H111 H112 T3 T351 T4 T42 T6 T651
Upamhi DC: 100-2600mm
Upamhi hweCC 100-1700mm
Pamusoro kurapwa: Mill kupedzisa, nekusimbisa, nebefu, anodized, ruvara unhani, makorari
Ruvara-rwakafukidzwa aruminiyamu coil kupfeka dzakakamurwa kuita: polyester yakavharwa aluminium coil (PE), fluorocarbon yakavharwa aluminium coil (PVDF). Iyo polyester yekunamatira inoumbwa nekubheka pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro kwenguva zhinji inogona kuumba kuenderera uye kwakasimba kunamatira. Iyo firimu yakasimba ine yekudzivirira yekushongedza zvinhu. Iyo anti-UV kupfeka. Iyo polyester resin inoshandisa iyo ester bond-ine yakakwira mamorekuru polymer muketani huru seye monomer, uye alkyd resin inowedzerwa. Iyo ultraviolet absorber inogona kuganhurwa mu-sub-gloss uye yakakwira-gloss akateedzana maererano nekubwinya. Inogona kupa mavara akapfuma kune zvigadzirwa zvealuminium zvine mavara, uye ine kubwinya kwakanaka uye kutsetseka, pamwe nekugadzirwa kwepamusoro uye kunzwa, uye inogona zvakare kuwedzera pfungwa yekuisa uye hutatu-hukuru. Inogona kuchengetedza zvinhu kubva mukuratidzwa kumhepo uye kurwiswa nemwaranzi yeultraviolet, mhepo, mvura, chando, chando uye kutonhora; kupfeka kunogona kuita basa rekudzivirira nekuda kwekusiyana kwekushisa, kutonhora-kutonhora macircuit, magasi anoparadza uye tupukanana. Inonyanya kukodzera kushongedzwa kwemukati uye mabhodhi ekushambadzira
Fluorocarbon Yakavharwa Ruvara Yakaputirwa Aluminium Coil (PVDF)
Fluorocarbon coating ndeye PVDF resin inonyanya kureva kupfeka kwevinylidene fluoride homopolymer kana copolymer yevinylidene fluoride uye zvimwe zvidiki zve fluorine-ine vinyl monomers. Iyo chemakemikari dhizaini yeiyo fluoric acid base zvinhu inosanganiswa ne fluorine / kabhoni chisungo. Iko kudzikama uye kuomarara kweichi chimiro chemakemikari chinoita kuti zvimiro zvemuviri zve fluorocarbon kupfeka zvive zvakasiyana nezvakajairika kupfeka. Pamusoro pechimakanika zvivakwa zvekupfeka kuramba, kukanganisa kusagadzikana kune kuita kwakanakisa, kunyanya mune yakaoma mamiriro ekunze uye nharaunda inoratidzira-refu kupera kupera, anti-ultraviolet kuita. Mushure mekukochekedzwa pakakwirira tembiricha kuti muumbe firimu, mamorekuru chimiro mune yekunamatira yakasimba uye ine yakanyanya mamiriro ekunze kusagadzikana. Fluorocarbon yekupfeka inogona kukamurwa kuita echinyakare fluorocarbon uye nano fluorocarbon kupfeka zvinoenderana nepamusoro pefirimu fomati dhizaini.
Ruvara-rwakafukidzwa aruminiyamu coil ine rakapfuma ruvara renji, kunyangwe iri yenzvimbo dzekugara dzevanhu, hombe nzvimbo dzekutengesa kana nzvimbo dzakakura dzekuratidzira, mavara-akaputirwa aruminiyamu coils anogona kuwedzera ruvara kwariri. Mapurasitiki akanaka uye machining zvivakwa zvinoita kuti chive chinhu chakanakira zvemhando dzakasiyana dzekuvaka. Ruvara-rwakafukidzwa aruminiyamu coils dzakapa vagadziri, vagadziri uye varidzi vane yakasarudzika nzvimbo yemahara ekunze madziro uye siringi, uye zvakare ari akakosha kwazvo maficha ekuvaka ekuenzanisira. Kunyangwe chiri chakasiyana-siyana chinoshanda chihombe-chivakwa kana chivakwa chakasarudzika uye chinogadzira chitsva, chivara-chakaputirwa aluminium coil inogona kugara ichizadzisa zvakasiyana zvinodikanwa zvemazuva ano uye zvekare echinyakare ekuvaka masitaira, zvichiita kuti chivakwa chiwedzere kuve neruvara. Izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa muminda yakawanda senge zvigadzirwa zvemagetsi, zvishandiso, mwenje, kurongedza, kushongedza kwemusha zvichingodaro.
Chigadzirwa chinoshandisa dzakasiyana siyana: kuvaka (aruminiyamu inoumbwa nepaneru, zinga realuminium, denga remabhokisi, isina moto veneer, sirin'i yealuminium, zvivharo, gonhi rinotenderera, musuwo wegaraji, musasa, kudonha gutter), midziyo yemagetsi (komputa kesi, yemagetsi pani), Kuvhenekesa, fanicha, kuratidzira kwezuva, ducts yemhepo-kutonhodza, nezvimwe.
Pashure: Corrugated jira simbi kuputira aruminiyamu pepa chemarata aluminium machira
Zvadaro: Rakanaka mukurumbira extruded chiwanikwa 6061 6082 5083 2024 7075 yakatenderera aluminium bar
anodized aruminiyamu coils
Pe zvemapuranga aruminiyamu coils
PVDF aruminiyamu coil
Aluminum ubvise / Coils 1000series, 3000series, 50 ...